Knowledges Zone: Comment မှာ ပုံလေးတွေထည့်ပို.ရအောင်
ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ဘာလော့ကို သွားလည်ကြရင်း မှတ်ချက်လေးတွေ ရေးတဲ့အခါ ပုံလေးတွေနဲ့ ထားခဲ့ကြရင် ပျော်စရာကောင်းပါတယ်...
စာရေးထားတာထက် ပုံလေးတွေနဲ့ တွဲရေးတဲ့အခါ သူငယ်ချင်းတွေကလဲ သဘောကျမှာပါ...
သူငယ်ချင်းတွေကလဲ မှတ်ချက်လာရေးတဲ့အခါ ပုံလေးတွေနဲ့ ဆို ကိုယ့်စာမျက်နှာမှာ ပုံလေးတွေ နဲ့လှပနေမှာပါ...
ကျွန်တော်က သူငယ်ချင်းတွေဆီသွားလည်ရင် ပုံလေးတွေနဲ့ မှတ်ချက်ရေးတတ်ပါတယ်...
ကျွန်တော်က လာလည်လို့ပုံလှလှလေးတွေရရင် လွမ်းပျော်တတ်ပါတယ်...
ဒီစာလေးက ပုံလေးတွေနဲ့ မှတ်ချက်ဘယ်လိုထည့်ရလဲဆိုတာ မသိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ရည်ရွယ် ရေးသားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်...
Comment Box မှာ ပုံလေးတွေ ထည့်ပုံ၊ ထည့်နည်း ၃-မျိုး ရှိပါတယ်...
(၁) ပုံအဆင်သင့်ရှိပြီး Website များမှ ပုံများကို ထည့်နည်း
(၂) Google မှ မိမိထည့်လိုသောပုံရှာ၍ ထည့်နည်း
(၃) မိမိကွန်ပျူတာတွင်ရှိသော ဓါတ်ပုံကို ထည့်နည်း
ကျွန်တော်အများဆုံးအသုံးပြုသော Website များမှာ http://www.glitter-graphics.com , http://www.spicecomments.com , http://www.friends18.com/ ဖြစ်ပါတယ်...
၁။ http://www.spicecomments.com ကို ဖွင့်လိုက်ပါ...
၂။ Category အများကြီးရွေးချယ်လို့ ရပါတယ်...
ကျွန်တော်ကတော့ Flower ကို ရွေးချယ်ပြီး Click ပြုလုပ်လိုက်ပါတယ်...
Flower ရွေးနိုင်တဲ့ နံပါတ်တွေကို အများကြီးတွေ့ ရမှာပါ...
မိမိ ပို့ ချင်တဲ့ပန်းလေးအောက်မှာ HTML Code Box တွေ့ ရမှာပါ...
အဲဒီ Code ကို Click လုပ်လိုက်တာနဲ့Select All ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်...
Select ဖြစ်နေတဲ့အပေါ် Right Click ပြုလုပ်ပြီး Copy လို့Click လုပ်ထားပါ...
၃။ မိမိပို့ လိုတဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ Comment Box မှာ Right Click ပြုလုပ်ပြီး Paste ကို Click ပြုလုပ်ရုံပါပဲ... ဒါဆိုပုံထည့်ပြီး ဖြစ်သွားမှာပါ...
Code ရဲ့ အပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ အောက်မှာဖြစ်ဖြစ် မိမိရေးလိုတဲ့ အကြောင်းအရာကို ရေးပါ...
ပြီးရင် မှတ်ချက်ထည့်မယ် ကို Click ပြုလုပ်ပါ... ဒါဆို ပုံနဲ့ စာတွဲပြီး ပို့ ပြီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်...
4 နောက်တစ်ခုထပ်သင်ပေးချင်တာက HTML Code ကို ထည့်ပြီးရင် အဓိကက Image Code ကို ရွေးပြီး ကျန်တာကို ဖျက်ပစ်လိုက်လို့ ရပါတယ်...
ဥပမာ...မိမိရွေးလိုက်တဲ့ Code က-
<br><a href="http://www.spicecomments.com/"><img src="http://s338.photobucket.com/albums/n430/spicecomments/flowers/00034.jpg" border="0" alt="Flowers Comments"></a><br><br><b><a href="http://www.spicecomments.com/">Spicecomments.com - Flowers
Comment Box ထဲမှာ အဲဒီအတိုင်းမြင်ရမှာပါ... ဒီတိုင်းပို့ ရင် ပုံတွေရဲ့အောက်မှာ ပို့ တဲ့ Website Name တွေ ပါလာတာတွေ့ ရမှာပါ... အဲဒီ Name တွေ ပါမလာအောင်
လွမ်း အနီရောင်နဲ့ ပြထား တဲ့ အတိုင်းဖျက်ပစ်လိုက်ပါ... Website Name တွေ
ပုံအောက်မှာ ပါမလာတော့ပါဘူး...ပုံနဲ့ တွဲနေတဲ့ Website Name ကတော့
(၂) Google မှ မိမိထည့်လိုသောပုံရှာ၍ ထည့်နည်း ဒီနည်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ Blog တင်တဲ့သူတွေအတွက် အသုံးကျတဲ့နည်းပါ... ကျွန်တော် Comment ပို့ ရင်လဲ သုံးတတ်ပါတယ်...နားလည်အောင် တစ်ဆင့်ချင်း ပုံတွေနဲ့ ရှင်းပြသွားပါမယ်...
၁။ http://www.google.comကို ၀င်လိုက်ပါ...
၂။ အနီရောင်ဝိုင်းပြထားတဲ့ image ဆိုတာကို Click လုပ်ပါ...
၃။ Search Box မှာ မိမိလိုချင်သောပုံကို ရိုက်ထည့်ပါ... ဥပမပန်းက မနက်ခင်းဆို Breakfast
လိုက်ပို့ မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Search Box မှာ Breakfast လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်...
ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း Breakfast အစားအစာပုံတွေ ပေါ်လာပါတယ်...
ပို့ ချင်တဲ့ ပုံတစ်ခုကို ရွေးပြီး Click လုပ်လိုက်ပါ...
၄။ ပုံတွင်ပြထားတဲ့အတိုင်း See full size image ပေါ်မှာ Right Click ပြုလုပ်ပြီး Copy Link Location ဆိုတာကို Click ပြုလုပ်ထားပါ...
၅။ မိမိပို့ လိုတဲ့ Comment Box မှာ ကင်မရာပုံလေးရှိပါတယ်... Click လုပ်လိုက်ပါ...
၆။ ပုံတွင်မြင်ရတဲ့အတိုင်း Box ပေါ်လာတဲ့အခါ insert an existing image အောက်မှာရှိတဲ့ http:// ကို Select လုပ်ပြီး Delete ပြုလုပ်လိုက်ပါ...
၇။ ပုံတွင်ပြထားတဲ့အတိုင်း ကွက်လပ် Box ပေါ်မှာ Right Click လုပ်ပြီး Paste ကို Click လုပ်လိုက်ပါ...
၈။ ပုံတွင်ပြထားတဲ့အတိုင်း Code ထည့်ပြီး ဖြစ်နေတာတွေ့ ပါလိမ့်မယ်...Add ကို Click လုပ်လိုက်ပါ...
၉။ Comment Box ထဲမှာ Code ရေးပြီးသားပေါ်လာပါလိမ့်မယ်... မိမိထပ်ရေးလိုသော စာသားများကို Code အပေါ်တွင်ဖြစ်စေ၊ Code အောက်ဖက်တွင်ဖြစ်စေ ရေးသားပြီး မှတ်ချက်ထည့်မယ် ကို Click ပြုလုပ်ပေးရုံပါပဲ...
မိမိကွန်ပျူတာတွင်ရှိသော ဓါတ်ပုံများမှာ .jpg, .bmp Format များနဲ့ ရှိပြီး လှုပ်ရှားမှုပါသော ပုံများမှာ .gif Format နဲ့ ရှိတတ်ပါတယ်...
အဲဒီပုံများကို http://tinypic.com , http://photobucket.com/ ,http://www.imageshack.us/ စတဲ့ Website တစ်ခုခုမှာ Upload တင်ပြီး HTML Code ကို ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်...
၁။ http://www.imageshack.us/ ကို ၀င်လိုက်လျှင် ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း မြင်ရပါမယ်...
ပထမအဆင့်အနေနဲ့Browse ကို Click ပြုလုပ်ပြီး မိမိထည့်မဲ့ပုံကို ရွေးချယ်ပါ...
ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့မိမိပုံရဲ့ Size ကို ရွေးချယ်ပေးလို့ ရပါတယ်... တတိယအဆင့်အနေနဲ့Start Upload ကို Click ပြုလုပ်ရုံပါပဲ...
၂။ ပုံတွင်မြင်ရတဲ့အတိုင်း HTML Code ကို ပြုလုပ်ပေးပြီး ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်...
တစ်ဆင့်ချင်း လိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင် Comment ကို ပုံလေးတွေနဲ့ ထည့်ပို့ တတ် သွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်...
ကျွန်တော်ဘာလော့မှာ လာလည်မယ်ဆိုရင်တော့ စာလေးတွေမှာ ပုံလေးတွေနဲ့လာပို့ ပေးရမယ်နော်...
ကိုယ်တိုင် မှတ်ချက်ကို ပုံလေးတွေနဲ့ပို့ နိုင်ကြပါစေ...